4shokelay: April 2010
ရန်ကုန်မြို့ မှအင်တာနက်ဆိုင်များတွင် စအဖ မှ အမျိုးသမီးငယ်များအား ဆိုင် ၀န်ထမ်းပုံစံဖြင့် လာရောက်ထည့်သွင်း မြုပ်နှံထားခြင်း
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာပြည်မှ အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် စစ်အစိုးရရဲ့ စအဖ (စစ်ဖက်ရေးရာ အထူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့)မှ အင်တာနက် ဆိုင်များတွင် ဆိုင်ရှင်များအား ဖိအားပေးပြီး ဆိုင်ဝန်ထမ်းပုံစံဖြင့် အမျိုးသမီးငယ်များအား လာရောက်ထည့်သွင်း မြုပ်နှံထားကြောင်း ရန်ကုန်မှ အင်တာနက်ဆိုင်ရှင်တစ်ဦးမှ ဆက်သွယ် ပြောဆိုလာပါတယ်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှ ပြောဆိုရာမှာတော့ လာရောက် သုံးစွဲတဲ့ လူငယ်တွေက အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေပဲဆိုပြီး သိပ်ပြီးဂရုမစိုက် ကြတဲ့အတွက် အန္တရာယ်များကြောင်း .. စအဖမှ အင်တာနက်ဆိုင်ရှင်များကို ဖိအားပေးပြီး အတင်းလာရောက် ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ထည့်ထားကြောင်း.. ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း လာရောက် ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ကြောင်း ...ဆိုင်ပိုင်ရှင်များလည်း စိတ်ညစ်နေရကြောင်း ဒီသတင်းကို ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးစေလိုကြောင်း ဆက်သွယ် ပြောကြားလာပါတယ်။
ပြည်တွင်းက ညီအကို မောင်နှမများ အားဆက်လက် ဖြန့်ဝေပေးကြပါရန်....
Mail မှပေးပို့ လာသူအားကျေးဇူးတင်လျှက် ဖိုးရှုပ်လေး
Posted by 4shokelay at 3:19 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 3:00 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 11:58 AM No comments:
သူသေကိုယ်ရှင် တုန့်ပြန်ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ကြရတော့မယ်။ လက်နတ် သုံးမျိုးကိုင်ဆွဲ ရဲရဲတိုက်ပွဲဝင်ကြ
>>>>> စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး ရည်မှန်း ပန်းတိုင်တခုတည်းချမှတ်၊ ရှေးရှု၊ ရင်ဆိုင် ချီတက်ရေးလက်နတ်
ဘဘဦးဝင်းတင် ရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ရည်မှန်းပန်းတိုင်ဟာ ဘယ်တော့မှ မပျောက်သွားဖူး။ ယခုဓါတ်ပုံကို ဖော်ပြချင်သဖြင့် ၁၂ ရက်၊ မတ်လ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ မွေးနေ့ကျရောက်ခဲ့စဉ် ဘဘ ဦးဝင်းတင် ရဲ့ ရှစ်ဆယ်နှစ်ပြည့် စကားသဝဏ်ထဲမှ စာသားနှင့်ပူးတွဲဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by HRmyanmar at 12:39 PM No comments:
Generation Wave ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ဆောင်........
ကျနော်တို့Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး) သည် နအဖ စစ်အစိုးရ၏ တဖက်သတ်ရေးဆွဲထားသော အခြေခံမှုများနှင့်
တရားမမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့် ကျင်လျှက်ရှိနေပီး ယနေ့ ဧပြီလ၊ ၈ - ၉ ရက်နေ့ ၊ ၂၀၁၀ခုနစ်တွင် မကွေးတိုင်း၊ မင်းဘူးမြို့ နယ်ရှိ
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲအတွင်းတွင် “စစ်အာဏာရှင်၏ တရားမမျှတသော၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့် ကျင်ကြ” စာတမ်းပါ စာရွက်စာတမ်းများကို
ဖြန့် ကျဲခဲ့ ပါသည်။ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးနှင့်လူငယ်များ အနေဖြင့် လည်း နအဖ စစ်အစိုးရ၏ တရားမမျှတသောရွေးကောက်ပွဲနှင့်
မတရားဖိနှိပ်နေမှု့ များအား နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် အတူပူးပေါင်း ဆန့် ကျင်၍ အရှိန်မြှင့် လှုပ်ရှားမှု့ များတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါရန် အလေးအနက်
“စစ်အာဏာရှင်၏ တရားမမျှတသော၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့် ကျင်ကြ”
Our organization Generation Wave firmly opposes the Constitution Law prejudiced by the military regime and the unjust 2010 Election, and we carried out the Pamphlets Campaign mentioning " Oppose Unjust 2010 Election to be held by the Military Regime" at the Man-Shwe-Sattawya Pagoda festival in Minbu, Magway Division on 8-9th April,2010.Hence, we highly encourage all the people and the young in Myanmar to collaborate with us in activities to go against the exercise of oppressive power of the military government and the unjust election.
" Oppose Unjust 2010 Election to be held by the Military Regime"
Posted by 4shokelay at 5:28 PM No comments:
“ဒီနှစ်တော့ ရန်ကုန်သင်္ကြန် စည်မှာ မဟုတ်ဘူး” ပြောနေကြ သူတွေ ဖျားသွားသည်။ ထိုသို့ ဖျားသွားသူ များထဲတွင် ဒေဝါလီ မဂ္ဂဇင်းလည်း ပါသည်။ ဒေဝါလီ မဂ္ဂဇင်းက ရန်ကုန် သင်္ကြန် မစည်ဟု ပြောသူထဲတွင် ထိပ်ဆုံး မဟုတ်လား။ နောက်ထပ် ဖျားသူ ကတော့ ဦးရုက္ခစိုးဖြစ်သည်။ နေပူပူတွင် ချင်းမိုင်ကျုံးရေ ရေခဲစိမ်ဖြင့် အပက်ခံရသောကြောင့် နှာတချေချေ ဖြစ်နေသည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟတ် ….. ဟတ် …. ဟတ်ချိုး။
ချိုကုပ်။ ။ ဝက်တုပ်ကွေးများလား ဦးရုက္ခစိုးရယ်။ ဒီလောက်ဖြစ်နေလည်း ချင်းမိုင်မှာပဲ အေးအေး နေပါတော့လား။ ဘာလို့ ရန်ကုန် လာနေလဲ။
ကန်တော်ကြီးစောင်း တနေရာတွင် မိန့်မိန့်ကြီးပြုံး၍ ဗုံး ၃ လုံးကွဲထားသော နေရာကို ကြည့်နေသည့် ချိုကုပ်ဒူးကြီးနှင့် ဦးရုက္ခစိုးတို့ အချီအချ ပြောနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဝက်တုပ်ကွေး မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ချင်းမိုင်သင်္ကြန်မှာ ဖိုးရှုပ်တို့ ကြွက်စုတ်တို့နဲ့ တရက်ပါသွားမိလို့ပါ။ ရန်ကုန် လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အကြတ်နေ့ ဗုံးကွဲတဲ့ ကိစ္စ သိချင်လို့ ဆိုပါတော့။
ချိုကုပ်။ ။ ဒေဝါလီမဂ္ဂဇင်းက ပြောထားသမျှ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ ဟီဟိ။ ရန်ကုန် သင်္ကြန် မစည်ဘူးဆို။ ရန်ကုန် သင်္ကြန် စည်ရုံတင်မကဘူး တခါတည်း ကမ္ဘာက ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားသွားတာ တွေ့ပြီမဟုတ်လား။
ရုက္ခစိုး။ ။ တော်တော် ဆိုးတာပဲဗျာ။ ဘယ်သူကများ လုပ်တာလဲ။ ချိုကုပ်ဒူးကြီး မသိဘူးလား။
ချိုကုပ်။ ။ မသိဘဲ ဘယ်နေမလဲဗျ။ ဒါမျိုး ဘယ်သူက လုပ်မှာလဲ စဉ်းစားကြည့် … ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုးတွေပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။
ရုက္ခစိုး။ ။ ခင်ဗျား သတင်းစာထဲကနေ စွပ်စွဲတဲ့ သူတွေဆီမှာ ဒီလောက် လက်နက် ကိရိယာ ရှိပါ့မလားဗျာ။ သူတို့ မှာလည်း ဖန်ဒင်တွေ အဖြတ်ခံရလို့ မွဲနေရှာတာပါ။ တတ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ ထစ်ခနဲရှိ သူတို့ကိုပဲ စွပ်စွဲနေသလို ဖြစ်နေပြီ။
ချိုကုပ်။ ။ ဟာ … ဦးရုက္ခစိုးကလည်း၊ သူတို့ကို ကျုပ်က မစွပ်စွဲရင် သူတို့က ကျုပ်ကို စွပ်စွဲမှာပေါ့။ ဒီလိုပဲ ဦးအောင် ရမ်းရတာပဲ။
ရုက္ခစိုး။ ။ မဟုတ်သေးဘူးလေ။ ကျုပ်ပြောတာက … စွပ်စွဲတာကို ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ် ခွဲတဲ့သူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိချင်တာ။
ချိုကုပ်။ ။ သြော် ဦးရုက္ခစိုးရယ် ခက်နေပြန်ပါပြီ။ ရမ်းပါတယ်ဆိုမှ။
ချိုကုပ်ဒူးကြီး စကားမဆုံးခင် ထိုနေရာသို့ မိန်းမတယောက် ပျာယီးပျာယာဖြင့် ရောက်လာသည်။ သူ့ပုံစံကြည့်ရသည်မှာ ထဘီမနိုင် ပုဝါမနိုင်နှင့် အရူးမီးဝိုင်းနေပုံရသည်။ တခြားသူမဟုတ် ချိုကုပ်ဒူးကြီး ကတော် ဒေါ်ကွိုင်ကွိုင်ဖြစ်သည်။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ မောင်တော်၊ အောင်မလေး မောင်တော်ရဲ့ …။ မောင်တော် ကယ်ပါ၊ ကယ်ပါ မောင်တော်။
ချိုကုပ်။ ။ ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ နှမတော်ရယ်။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ နှမတော် ယတြာ အချေကောင်းတာ မြေးတော်လေး အသက်တော်နဲ့ သီသီလေးပဲ လိုတော့တယ် မောင်တော်ရဲ့။
ချိုကုပ်။ ။ ဘယ်လို ဘယ်လို။ နှမတော်က ဘယ်လိုများ ယတြာတွေ ချေလိုက်လို့လဲ။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ ဘယ်လိုမှ မဟုတ်ပါဘူး ဗုံးလေး ခွဲရုံလေးပါ။ ခွဲတာလည်း ရတနာ ၃ ပါး ဦးထိပ်ထားပြီး ၃ လုံးတည်း ခွဲတာပါ။ လူတွေက ချဲ့ကားပြီး ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ် လုပ်ကြတာ။
ချိုကုပ်။ ။ နေပါဦး နှမတော်ရဲ့ … မြေးတော် မျောက်လောင်းနဲ့ ဘယ်လိုများ ပတ်သက်နေလို့လဲ။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ အဲဒီနေ့က မြေးတော်လေးက နေပြည်တော်သွားမယ်လို့ ပြောထားလို့ ရန်ကုန်မှာ ခွဲလိုက်တာ။ မြေးတော် မျောက်လောင်းက စိတ်ပြောင်းပြီး လိပ်ခေါင်း … အဲ ယောင်လို့ … စိတ်ပြောင်းပြီး တေဂွသားတွေ ငှားထားတဲ့ သြစတြေးလျက အဝှာမလေးတွေနဲ့ အဲဇလုံမှာ ကဲမယ်ဆိုပြီး ဖြစ်သွားတာကိုး။ နှမတော်က မသိလိုက်ဘဲ ယတြာချေလိုက်မိတာ။ ကံကောင်းလို့ ကံတော်ကြီးစောင်းက ဗုံးဆံက အင်းလျားထိ မလွင့်တာနော်။ အောင်မလေး ဘုရားဘုရား … ခုထိ ရင်တုန်တုန်းပဲ။
“သူ့ အမျိုးကျ သိတတ်လိုက်တာ” ဟု ဦးရုက္ခစိုးက စဉ်းစားနေသည်။
ချိုကုပ်။ ။ ဖြစ်ရလေ ကွိုင်ကွိုင်ရယ်။ ဘာအတွက်များ ယတြာချေတာလဲ။ မောင်တော်လည်း မသိရပါလား။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ မောင်တော်ပဲ ဆူဒန်သမ္မတကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်စေချင်တယ်ဆို။ သူနိုင်ရင် မောင်တော်လည်း အလိုလို တပ်ချုပ်ကြီးလုပ်ပြီး ဆက်အုပ်ချုပ်ရုံပဲဆို။ အဲဒါကြောင့် ယတြာချေပေးတာလေ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟင် … ဆူဒန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ယတြာချေပေးတယ် ဟုတ်လား။
ကွိုင်ကွိုင်။ ။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ဘာလဲ သူများကို အပြစ်တင်မလို့လား၊ လူလေး ၁၀ ယောက်လောက် သေတာကိုများ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်မနေနဲ့။ မောင်တော် အာဏာတည်မြဲရေး တို့အရေးပဲ။
ဦးရုက္ခစိုးကို ဒေါ်ကွိုင်ကွိုင်က နှုတ်သီးကောင်းလျှာပါး ရန်တွေ့လိုက်သည်။ ထိုစဉ် “ဒိုင်း” ဆိုသည့် သေနတ်သံ တသံ ကြားလိုက်ရပြီး သူတို့ရပ်နေရာ နေရာနား၌ ခိုတကောင် ပြုတ်ကျလာသည်။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးက လက်ထဲက သေနတ်ဖြင့် မကြည့်ဘဲ ပစ်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခို၏ ခြေထောက်တွင် စာတစောင်ချည်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်သည်။
“မိတ်ဆွေ ချိုကုပ်။ မိတ်ဆွေ၏ ယတြာကြောင့် ကျွန်ုပ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရကာ သမ္မတ ဆက်လုပ်နိုင်ပြီ။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာက အမြင်ကတ်၊ လူတကာကို နှိပ်စက်သဖြင့် စစ်ခုံရုံးအတင်ခံနေရသူပင် ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို နိုင်သည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်၏ ခြေဖျားမီအောင် အမြင်ကတ် မခံရသူ မိတ်ဆွေအနေနှင့် အလွယ်တကူ နိုင်မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဟု ကျွန်ုပ် ယုံကြည်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်က ယတြာကောင်းရန်နှင့် အစွမ်းကုန် ကလိန်ကကျစ် ကျရန်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမဝင်ဟု သင်္ကြန်အမြောက် ဖောက်သူများကို တကယ့်အမြောက်ဆံထည့်ပြီး ပစ်ပြလိုက်ပါ။ မိတ်ဆွေကို အထူး ကျေးဇူး တင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေအလှည့်တွင်လည်း ကျွန်ုပ် အစွမ်းကုန် ကူညီမည်။ ပုံ - ရှာမှရှားသည့် မောင်ဘရှား (ဆူဒန်သမ္မတ အသစ်စက်စက်၊ အဟောင်းလည်း ကျွန်ုပ်ပဲ)” ဟူ၍ စာတွင်ရေးထားသည်။ ချိုကုပ်ဒူးကြီးက မျက်နှာပိုး မသတ်နိုင်ဘဲ ပြုံးစိစိ လုပ်နေသည်။
ချိုကုပ်။ ။ ကိစ္စတော့ပြီးပြီ ဦးရုက္ခစိုးရေ၊ ကျုပ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကျုပ်လည်း သူ့လိုပဲ လုပ်မှာပဲ ဟဲဟဲ။ အဆွေတော်ကတော့ အားကိုးရတယ်ဗျာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဗုံး တရားခံက ခုမှပဲ တွေ့တာပေါ့နော်။
ချိုကုပ်။ ။ နေဦး နေဦး။ အဲဒီလို လက်လွတ်စပယ် မပြောနဲ့ဦး။ တရားခံက ရှာရဦးမှာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ တွေ့ပြီလေ၊ ခင်ဗျားမိန်းမပဲဟာ။
ချိုကုပ်။ ။ ဘယ်ရမလဲ …ကျုပ်က အမျိုးတော့ သိတယ်ဗျ။ ငါမကောင်းရင်၊ ငါ့အကြောင်းမရေးနဲ့၊ ငါ့မိန်းမ မကောင်းရင် သူများကို တရားခံရှာ ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ...။
ချိုကုပ်ဒူးကြီးက ပြောရင်းနှင့် မျက်လုံးက ဟိုဟိုသည်သည် ကြည့်လိုက်သည်။ ထိုစဉ် ခေါင်းငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နှင့် ကိုယ်ရောင် ကိုယ်ဝါ ပျိုးပြက် တောက်ပသူ တဦး အနားကို ရောက်လာသည်။
ချိုကုပ်။ ။ ဟော … တွေ့ပြီ … ဗုံးခွဲတဲ့ တရားခံ ခင်ဗျားပဲဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ ဒီလောက် တောက်ပနေမှတော့ … ဗုံးဝယ်စရာ ပိုက်ဆံလည်း ရှိမှာပဲ။
“ဟာ … ကျုပ် သိကြားမင်းပါဗျာ။ နတ်ပြည်ပြန်တက်မလို့ဟာ ကျုပ်စီးလာတဲ့ ကျွဲကို လိုင်စင်မဲ့ဆိုပြီး မ သွားလို့ ဘာစီးပြန်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ” ဟု ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ ပျိုးပြက်သူက မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ဖြေလိုက်သည်။
ချိုကုပ်။ ။ နားမလည်ဘူး … ။ ခင်ဗျားက လူစိမ်းပဲ။ ခင်ဗျားကိုပဲ တရားခံ လုပ်ရမယ်။
ရုက္ခစိုး။ ။ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ သိကြားမင်းက လူ့ပြည်မှာ ဗုံးကွဲလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲ။ ပြန်ခိုင်းလိုက်ပါ။
သိကြား။ ။ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်။ နောက်နှစ်တောင် မလာတော့ဘူးလား စဉ်းစားနေတာ။
ချိုကုပ်။ ။ သြော် … ဦးရုက္ခစိုးကပါ ရှေ့နေလိုက်တယ်ပေါ့။ ထင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ တကြိတ်တည်း တဉာဏ်တည်းတွေပဲ။ သေချာ စဉ်းစားလိုက်တော့ ဦးရုက္ခစိုးကလည်း ချင်းမိုင်က၊ ပြည်ပက တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိတယ်။ အခု သိကြားမင်း ဆိုတဲ့သူကလည်း ပြည်ပကပဲ။ စီးလာတဲ့ ကျွဲကလည်း လိုင်စင်မဲ့ … ဒီတော့ ဘာမှ စဉ်းစားစရာ မလိုဘူး။ ဖမ်းကြဟေ့ … ဖမ်းကြ။ ဗုံးခွဲတဲ့ တရားခံတွေ ဖမ်းကြ။
ချိုကုပ်ဒူးကြီးက အသံပြဲကြီးနှင့် အော်လိုက်သည်။ ဦးရုက္ခစိုးနှင့် သိကြားမင်းတို့မှာ လူသာမန်များ မဟုတ်ကြ သောကြောင့် စွမ်းအားရှင်များ၊ ကြံ့ဖွံ့များနှင့် ရဲများ မရောက်ခင်ပင် ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ကာ ဌာနေသို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လစ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် နောက်တနေ့ မြန်မာ့အမှောင် သတင်းစာ၌ စာလုံးမည်းကြီးများနှင့် သတင်းတပုဒ် ပါလာသည်။
“ဗုံးခွဲသည့် တရားခံ ၂ ဦးကို ချိုကုပ်ဒူးကြီးကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိသဖြင့် အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးစားသော်လည်း အနောက်အုပ်စုနှင့် ပြည်ပြေးများ၏ ကူညီမှုကြောင့် လွတ်သွားရာ ဖမ်းဆီးနိုင်သူများကို ဆုတော်ငွေ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ တိတိ ချီးမြှင့်မည်” ဟူ၍ ဖြစ်လေတော့သည်။
ရန်ကုန်သားတာတေ Wednesday, April 21, 2010
Posted by 4shokelay at 8:53 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 7:04 PM No comments:
Posted by 4shokelay at 8:35 PM No comments:
Posted by 4shokelay at 4:25 PM No comments:
Posted by HRmyanmar at 10:07 AM No comments:
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကိုထောက်ခံ တဲ့ အနေနဲ့ သင်္ကြန်တွင်း အဝါ ရောင်တွေ များများ ဝတ်ကြဘို့အဝါရောင် သင်္ကေတ တွေဝတ်ဆင်ကြပါ ဆိုပြီး BLOG ... နှင့် Web side ..C-Box များတွင် အမြောက် အများ တိုက်တွန်းလာကြပြီ...........
ထိုသို့ ဆန့် ကြင်မှုများ ဆက်တိုက်လုပ်သင့်ပြီ......
အဖွဲ့ အစည်းများမှလဲ ဒီ Campaign ကိုထောက်ခံသင့်သည်။
Posted by 4shokelay at 2:45 AM 1 comment:
Posted by 4shokelay at 9:02 AM No comments:
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး KIA အဖွဲ့ ဖိအားပေးခံနေရခြင်း
စစ်အစိုးရသည် ၄င်းတို့နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များ အပေါ် နယ်ခြားစောင့်တပ်များအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖိအားပေး တိုက်တွန်းလျက် ရှိနေရာတွင် ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA အဖွဲ့ အနေဖြင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စကို ယနေ့အချိန်ထိ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအတွင်း ဆွေးနွေး အဖြေရှာနေဆဲဖြစ်ကြောင်း လိုင်ဇာမှ အမည်မဖော်လိုသူ KIA တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
KIO ခေါင်းဆောင်အများစုမှာ အသက်အရွယ်ကြီးလာသည့်အားလျော်စွာ စစ်အစိုးရ၏မူဝါဒအတိုင်း အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ဆောင်လိုကြသော်လည်း အလယ်အလတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကမူ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို လက်မခံလိုသူများရှိနေသည့်အတွက် ဘေးကြပ် နံကြပ်ဆိုက်နေရသည်။ လက်ရှိ KIO အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌနှင့် ဒုဥက္ကဌဆိုသူများမှာ ရုပ်ပြသက်သက်သာဖြစ်နေရပြီး အဓိကအားဖြင့် ဦးအင်ဘန်လမှ ကြီးစိုး ချယ်လှယ်နေကာ အဖွဲ့အစည်းပိုင်ငွေကြေးကိစ္စရပ်အ၀၀ကို ၄င်းစိတ်တိုင်းကျ စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲလျက်ရှိသည်။ ဦးအင်ဘန်လသည် ယခုလက်ရှိ KIO အဖွဲ့အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးရမဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာ မည်သည့် အကြံဥာဏ်မှ မပေးနိုင်ပဲ ကျန်းမာရေးကိုအကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်တိမ်းရှောင် နေပါသည်။ KIO အဖွဲ့အတွင်း ဥက္ကဌ ဦးဇောင်းခရား နှင့် ဒုဥက္ကဌ ဦးဂေါ်ရီဇော်ဆိုင်းတို့ သြဇာကျဆင်းနေသည့်အချိန်ဖြစ်နေပြီး တပ်ဖွဲ့ ၀င်များကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် အင်အားမရှိဖြစ်နေရရှာသည်။
KIA တွင် အစဉ်အလာမရှိသည့် ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်အဖွဲ့ မှ သဘောထားတင်းမာနေပြီး KIO လူကြီးများနှင့် သဘောကွဲလွဲလျက်ရှိကြောင်း ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင် သည် တဇွတ်ထိုးလုပ်တက်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများ နှင့်လည်း မကင်းသူအဖြစ် လိုင်ဇာတွင်သတင်းကြီးနေသူဖြစ်ပါသည်။ KIO ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အများစုအနေဖြင့် တရုတ်နယ်စပ်လိုင်ဇာဒေသတွင် မနေထိုင်လိုကြဘဲ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တွင်သာ နေထိုင်လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိနေကြပါသည်။ အချို့ KIO ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် KIA မှ နှုတ်ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိနေပါသည်။
KIA စစ်ြပင်ဆင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ``၁၉၈၉ နောက်ပိုင်း ဝေးလံသည့်အတွင်းပိုင်းဒေသများအထိ လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ပြီဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့် ယခင်တစ်ချိန်ကလို ပြောက်ကျားစစ်ကြာရှည်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ လက်အောက်ငယ်သားများမှာလည်း မြို့ပေါ်တွင် အေးဆေးစွာနေထိုင်လိုသူ များပြားသဖြင့် ရေရှည်စစ်ပြန်လည် ဆင်နွှဲရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း´´ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် စစ်ရေးအကဲခတ်များက သုံးသပ်ထားပါသည်။ တရုတ်ဘက်ကလည်း ၄င်း၏နယ်စပ်တလျှောက်မှာ မတည်ငြိမ်မှု ပြန်ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေပြီး KIO အတွက် နေရာမပေးနိုင်ကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တရုတ်၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ရှိနေသဖြင့် KIA အား စစ်ရေးအထောက်အကူမပြုနိုင်ကြောင်း KIO သို့ တရုတ်မှ ဖိအားပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကချင်ပြည်လူထု နဲ့ ကချင်အတိုင်ပင်ခံခေါင်းဆောင်များက KIO အဖွဲ့ကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ် မြင်လိုကြပြီး ကချင်ပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုသာ လိုလားကြသည်။ သေနတ်သံများတစ်ဖန် ပြန်လည်ကြားရမည်ဆိုလျှင် လက်ရှိ KIA ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် စစ်ပွဲကို ဦးဆောင်မည့် ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲ လက်အောက်ငယ်သားအချို့ စစ်မတိုက်လိုမှုတွေကြောင့် ထွက်ပြေးမှုများနှင့်သာ ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိနေပါသည်။
GMAIL မှတဆင့်ပေးပို့လာသူအား ကျေးဇူးတင်လျှက်
Posted by 4shokelay at 1:50 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 9:54 PM No comments:
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်သတင်းနှင့် ကမ္ဘာ့လူလိမ်ကြီးများဟူသည့် သတင်းတို့ကို ဟိုဘက်ဒီဘက် ဖေါ်ပြမိသည့် အတွက်သတင်းစာတိုက်ဝန်ထမ်းများ အဖမ်းခံရခြင်း၊ ဆူပူမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီမရနိုင် ဆိုသည့် စကားရပ်ကို `မ´ဖြုတ်လိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီရနိုင် ဟုဖေါ်ပြမိသဖြင့် ၀န်ထမ်းများ စစ်ဆေးခံရပြီး အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း တို့မကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန် ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၀ မိုးမခ ကူးယူဖော်ပြသည်
Posted by 4shokelay at 1:16 AM No comments:
၁။ စစ်အစိုးရ၏ တို့တာဝန်အရေး(၃)ပါးမှ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု
ဒို့အရေး…ဆိုသည့်အချက်အတိုင်း.. စစ်အစိုးရမှ တိုင်းရင်းသားညီညွတ်ရေး ကိုအမှန်
၃။ ယခုစစ်အစိုးရမှထုတ်ပြန်သော ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများထဲမှကန့်သတ်ချူပ်ချယ်မှုများသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် မတရား ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျ ခံနေရသော (သို့) ယုံကြည်ချက်ဖြင့်
၄။ တပ်မတော်၏ စစ်သားအရင့်အမာကြီး များဖြစ်သော လက်နက်ကိုင်စစ်ဗိုလ်ချူပ်ကြီး များအနေဖြင့် မည်သည့်Aတွက်ကြောင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုများ အပေါ်အလွန်ကြောက်ရွံရပါသလဲ။
၅။ စိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲထားသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင်လေးပုံတပုံသော လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုစစ်တပ်
မှနေရာယူ အကျောရထားပြီး ရိုးသားသောနည်း…တရားမျှတသောနည်းလမ်း တို့ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်၏အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်အပါအ၀င်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် စစ်အစိုးရသည်လိပ်ပြာသန့်စွာမယှဉ်ပြိုင်ဝံပါသလဲ…။
၈။ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံး ပါဝင်နိုင်သောလွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမည်
မျက်နှာပြောင်ပြောင်ဖြင့်ဗြောင်ငြင်းဆန်နေခြင်းတို့သည် လူကြီးလူကောင်းဆန်သည်ဟု အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်ချူပ်ကြီးများယူဆပါသလား
၉။ ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး-အဆိုးမြင်ဝါဒီများအားဆန့်ကျင်ကျ…ဟူ၍ပြည်သူ့သဘောထားတွင်ပါရှိပါသည်။ တရုတ်၊ ရုရှားနှင့်နံမည်ပျက်
လူမိုက်စာရင်းဝင်မြောက်ကိုးရီးယားတို့ကို အားကိုးဖားယားဆက်ဆံနေရသူများမှာ ပြည်ပအားကိုးသောပုဆိန်ရိုးများဟုတ်ပါ၏လော.။
၁၁။ မြန်မာသမိုင်းအစဉ်အလာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၊ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးစောမောင်နှင့် နိုင်ငံရေးအရှိန်အ၀ါအင်အားကြီးထွားလာသော
ဗိုလ်ချူပ်ကြီးခင်ညွန့် အစရှိသည့် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်(ခေါ်) အာဏာရှင်များနှင့် ၄င်းတို့၏အပေါင်းအပါ များသည် မည်သူတဦး
၁၂။ အာဏာရှင်ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အနေဖြင့် မိမိ၏အတ္တနှင့် အာဏာရရှိတည်မြဲရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၊ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး
၁၃။ အာဏာရှင်ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အပေါ် နောင်လာနောင်သား စစ်ဗိုလ်ချူပ်များ မိမိအပေါ် ထာဝရသစ္စာ စောင့်သိ နေမည်ဟု
၁၄။ အာဏာရှင်ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နှင့် အသက်အရွယ်ရပြီးထိပ်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအနေဖြင့် နောင်မည်မျှကြာအာင်အာဏာ
၁၅။ လူတဦးတယောက်၏ မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေး..လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားနိုင်ခွင့်..အစရှိသည်တို့ကို လက်နက်- အာဏာတို့
ဖြင့်ကန့်သတ်ချူပ်ချယ်ထားမှုကိုစည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီ ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသလား..။
၁၆။ အနှစ်(၂၀)ကျော် ဥပဒေ၏အထက်မှ ရာဇ၀တ်မှုမကင်းသော လုပ်ရပ်များဖြင့် မတူညီသောအမြင်ရှိသူ ရဟန်း-ရှင်လူ- ပြည်သူ-
ကျောင်းသား-သတင်းသမားများ ပြုမှုဆက်ဆံနေခြင်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီ တရားမျှတသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါသလား…။
၁၇။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အစဉ်အလာရှိ နံမည်ရ အနာဂါတ် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများအား မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်၍
သန်း ၆၀ နီးပါးသော ရဟန်း၊ ရှင်လူ ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့၏ မွေးရာပါလူအခွင့်အရေးတို့ကိုပိတ်ပင်ခံရကာအကျဉ်းသားသဖွယ်
အပါအ၀င် အပေါင်းအပါစစ်ဗိုလ်ချူပ်များအပေါ်မည်ကဲ့သို့ တုန့်ပြန်မည်ဟုထင်မြင်ပါသနည်း…။
၁၈။ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ငြိနှိုင်းကြည့်ခြင်းအားကို ပြည်သူလူထုအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ မှပင်မြင်တွေ့လို
သော ကောင်းသော ဆန္ဒအရင်းခံဖြစ်ပါသည်၊ လက်နက် အာဏာ ကိုလက်ကိုင်ပြု၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး လမ်းစဉ်ကို
၁၉။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မပါဝင်သော၂၀၁၀-ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်သူများက အသိ
We love fair and justice.
Burma…….. Free! Free! Free!
Iron Lady Daw Aung Sun Su Kyi…….Free! Free! Free!
Mr. Free Lance.
Posted by 4shokelay at 7:19 PM No comments:
တာဝန်သိပြည်သူများမှ ဆက်လက် ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်သွားရန် ဂတိပြုခြင်း
ပုံလေးကတော့ ကိုဖြိုးဝေ ဆီမှ ရယူပါသည်
အို . . . မိခင် နှင့်ပြည်သူကိုချစ်သောခေါင်းဆောင်ကြီးများခင်ဗျာ . . .
၁ . အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။
၂ . ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသမားများ လူထုကြီးနှင့် ကွဲပြားသွားသဖြင့်ဂုဏ်ယူပါတယ် ။
၃ . အတွင်ခြများပေါ်လွင်လာသဖြင့်ထပ်မံကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
၄ . ထို့ ကြောင့်ဆက်လက်ထောက်ခံ လက်တွဲပါမည်ဟု ၀န်ခံဂတိပြုပါသည် ။
ဒီမိုကရေစီရဲဘော် များနှင့် တာဝန်သိပြည်သူများမှ
Posted by 4shokelay at 9:25 AM No comments: